दाङमा ‘यौ’,न स’म्पर्क गर्दा गर्दै २७ वर्षका युवकको लिं,ग भाचिएपछी . – jagritikhabar.com
दाङमा ‘यौ’,न स’म्पर्क गर्दा गर्दै २७ वर्षका युवकको लिं,ग भाचिएपछी .
दाङमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एक जना २७ वर्षका युवकको सम्पर्क राख्दै गर्दा गोप्य अंङ भाँ’चि’एपछि सफल शल्यकृया गरिएको छ । मध्यरातमा श्रीमतीसंग सम्पर्क राखेका पुरुषलाई यस्तो घटना भएको हो । ति युवकको दाङको तुलसीपुर सिटि हस्पिटलमा सफल शल्यकृया गरिएको छ । राति करिब ३ वजे तिर अस्पताल आएका उनको शल्यकृया गरिएको हो । अहिले उनको सफल सल्यकृया पछि स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् ।
मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका बासिन्दालाई खुवाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको योजना २१ वर्षपछि बल्ल पूरा भएको छ। महांकालस्थित पानी ट्यांकीबाट चाबहिल र महांकाल क्षेत्रमा आइतबार मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको छ।
वितरणसँगै उपत्यकावासीले दुई दशकदेखि देख्दै आएको मेलम्ची सपना सार्थक बनेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) अन्तर्गतका ट्यांकीहरूमा मेलम्चीको पानी भरिएको छ। मीनभवन, अनामनगर, खुमलटार, पानीपोखरी, बालाजु, बाँसबारीलगायत क्षेत्रमा सोमबार पानी वितरण हुनेछ।
पहिलो दिन आइतबार साढे चार करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा सोमबारदेखि साढे आठ करोड लिटर वितरण हुनेछ। परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा वितरण गरिएको पानी नपिउन केयुकेएलले आग्रह गरेको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।